Dufacadii 5-aad oo u fariisatay imtixaanka aqbalaadda ee Jaamacadda Muqdisho faraceeda Bosaso (Sawiro) – Radio Daljir
Oktoobar 1, 2012 12:02 g 0
Bosaso, Oct 01 – Waxaa maanta? imtixaanka aqbalaadda ee Jaamacadda Muqdisho faraca ay ku leedahay magaalada Boosaaso ufariistay dufcadii shanaad ee aradayda? donaysysa inay wax kabartaan kuliyadaha kalle duwan ee jaamacaddu ay ka koobantahay.
Ardayda imtixaanka aqbalaadda ee jaamacadda Muqdisho u fariistay ayaa? isugu jira wiilal iyo gabdho oo kakala yimid magaalooyinka waawayn ee Puntland iyo qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya.
Gudoomiyaha Jaamacadda Muqdisho faraceeda Bosaaso Aadan Axmed Xuseen (Xerow)? oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in sanadkani jamacadu ay soo kordhisay kuliayado cusub taasi oo uu sheegay inay ka faa’iidaysan doonaan ardayada daneynaysa waxbarshada heer jaamaceed, isagoo intaasi raaciyay in jamacadu ay heshiis lagashay jaamacado caalami? ah oo ka caawin doona waxbarashada ardayda jaamacadda dhiganaysa.
Dhinaca? kalle, ardayda saaka ufariistay imtixaanka aqbalaada ee jaamacadda Muqdisho oo laga dheehanayay sida ay ugu faraxsan yihiin inay kamid noqdaan ardayda jamacada waxkabarata ayaa sheegay inay rajaynayaan inay natiijo wanaagsan ay ka keenaan imtixaanka ay u fariisteen.
Jaamacadda Muqdisho University? qaybteeda Bosaaso oo? la’ aasaasay sanadkii 2009-kii ayaa waxaa ka qalinjebiyay 2 dufcadood, waxaana ay jaamacaddu qayb katahay 40-ka? jaamacadood ee ugu horeeya jaamcadaha Africa.
Banaanbax lagu diidanyahay Somaliland iyo nabadayn laga wado Qorulugud oo ka dhacay Buuhoodle.(Sawiro).